Boqor Burhaan Boqor oo dadka Puntland ugu baaqay in loo wada dhaqaaqo doorasho xor ah (Dhegeyso) – Radio Daljir
Boqor Burhaan Boqor oo dadka Puntland ugu baaqay in loo wada dhaqaaqo doorasho xor ah (Dhegeyso)
Diseembar 29, 2013 6:11 b 0
Garoowe, December 29, 2013 – Isimada Puntland ayaa shalay soo saaray go?aamo saddex ah oo khuseeya doorashada dhow ee Puntland, waxaa ka mid ah qodobada la go?aamiyey ee ka soo baxay Isimada in doorashada Puntland ay dhacdo xiligeeda 8 janaayo 2013-ka.
Sidoo kale isimada ayaa faray guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee madaxweynuhu magcaabay in aysan gudbin liiska Xildhibaano aysan saxiixin isimada marjaca ah ee loo noqdo.
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ah Isimada Puntland ee go?aanka soo saaray ayaa si qoto-dheer uga hadlay natiijada shirarkoodii ugu dambeeyey, wuxuu sheegay Boqor Burhaan inaan cidna loogu hiilin qodobada saddexda ah ee ay soo saareen.
Boqorka oo radio Daljir la hadlayey ayaa tilmaamay in qodobadu ay dhamaantood yihiin kuwa lagu saleeyey midnimada Puntland.
Isimadu waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in doorashada Puntland dhacdo xiligeeda iyadoo gacmaha la is haysto sida uu sheegay Boqor Burhaan oo si cad u xusay in ay dadaal adag midaas ugu jiraan.
Dhegeyso:- Boqor Burhaan Boqor Muuse oo u waramay Cabdirisaaq Silver oo daljir ka tirsan
Islaan Ciise ?Guddiga xalinta khilaafaadka waa inaan lagu fara-gelin howshooda shaqo? (Dhegeyso)
Cabdi Mire ?Ceelbuh 7 caruura ayaa shuban biyood u dhintay xarun caafimaadna ma jirto? (Dhegeyso)